Dagaalka Yemen: Mareykanka oo Sacuudiga ku cadaadinayo inuu heshiis xabbad joojin oggolaado - BBC News Somali
Dagaalka Yemen: Mareykanka oo Sacuudiga ku cadaadinayo inuu heshiis xabbad joojin oggolaado
Qaramada midoobay oo ka digtay haddii dagaalka Yemen uu sii socda ay dalkaasi ka dhici doonto macluushi ugu xumeyd oo mudda 100 sana ah dunida soo marto
Mareykanka ayaa wuxuu la kulmayaa cadaadis beesha caalamka uga imanaya oo ku saabsan iney joojiso taageerada ay siineyso xulafada uu Sacuudiga horkacayo oo dagaalka ka wado dalka Yemen.
In ka badan toban kun oo qof ayaa ku dhimatay dagaalka sokeeye ee Yemen
Dagaalka Yemen ka socda maxaa sababay?
Duqeymaha diyaaradaha waxay sababeen burbur iyo dhaawac badan oo dadka rayadka ah soo gaaray
Madaxda Mareykanka maxay ka yirahdeen?
Mr Mattis oo ka hadlayey machadka Nabadda oo ku yaallo Washington talaadadi ayaa wuxuu sheegay Mareykanka inuu "mudda dheer uu ka warsugayey xaaladda Yemen".
"Marka waa inaan ka shaqeeynaa sidii dadaal nabadeed loo meel marin lahaa, mana dhaheyno mustaqbalka ayaa wax qabaneynaa. Waxaan dooneynaa inaan 30-ka maalmood ee soo socda gudahood aan howshaasi ku qabanno."
Maamulaha wuxuu ka walbahaarsan yahay wiilkiisa laga dilay
Mr Pompeo wuxuu xuutiyiinta uu ugu baaqay iney joojiyaan duqeynta ay ku sameeynayaan Saldhigyada Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta, Xulafaduna ay joojiyaan duqeymaha dhinaca cirka ee ay ka sameeynayaan deegaannada ay dadku ku badan yihiin.
Wuxuuna intaa ku daray "in la joogo xilligii colaadda Yemen la soo afjari lahaa, laguna beddeli lahaa wadahadallo si ay shacabka Yemen ay u helaan Nabad dalkoodana ay dib ugu soo dhistaan".
Jawaab noocee laga bixiyey baaqa Mareykanka?
Ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaab ah oo ka soo baxay Xulafada Sacuudiga uu hoggaaminayo, Xuutiyiinta ama Dowladda Yemen.
Mr Grifths wuxuu sheegay qaramada midoobay baaqa xabbad joojinta iney soo dhaweyneyso maadaamaa uu dagaalku xal noqon karin.
Wuxuuna intaa ku daray "qaramada midoobay iney ka go'an tahay iney ka shaqeyso sidi bil gudaheed dhinacyada Yemen isku hayo miiska nabadda la isugu keeni lahaa".
Orla Guerin oo la kulantay carruurta Yemen ee xanuunnada la ildaran
Xoghayaha arrimaha dibadda Ingiriiska Jeremy Hunt wuxuu Tweeterkiisa ku soo qoray "dhammaan dhinacyada isku haya Yemen baaqa uu Mareykanka u soo jeediyey ee muhiimka ah iney u hoggaansamaan Ingiriiskana uu soo dhaweynayo colaadda Yemen in nabad lagu soo afjaro."
Afar meelood oo seddex dadku waxay si uun ugu tiirsan yihiin kaalmo bani aadminimo
Haweeney u hadasha hay'adda IRC ayaa waxay sheegtay "howlaha gargaarka bani aadaminimada ee Yemen si shacabka loo gaarsiiyo iney lagama maarmaan tahay in si degdeg ah loo joojiyo colaadda."